Rafitra fikarakarana maloto efa misy sy fanamby | Reef Resilience
Amin'izao fotoana izao, misy karazana fomba fitantanana ny rano maloto. Ny fisafidianana fomba fikarakarana rano maloto dia tena voafaritra tsara ny toerana sy ny toe-javatra. Antony maro no mibaiko hoe inona no karazana rafitra mety kokoa: rafitra fitsaboana maloto, foibe na rafitra fitsaboana eny an-toerana (décentralized). Ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny vondrom-piarahamonina iray dia mety tsy mety amin'ny hafa. Ny fiheverana ny fisafidianana ny rafitra dia tokony ahitana:
Fepetra sy andrasana ny sosialy sy ny kolontsaina
Fanohanana ara-politika na faneriterena mifehy
Geology sy hydrolojia eo an-toerana
Fotodrafitrasa efa misy
Jereo ireto tranga fanadihadiana momba ny asa ho ivon'ny fanadiovana ny rano maloto eto amin'ny nosy Roatan, Honduras ary Bonaire.
Ny fitaovana fanampiana ny fanapaha-kevitra momba ny fepetra ara-tsosialy, ny fahasalaman'ny olombelona ary ny fepetra momba ny tontolo iainana amin'ny famaritana ny rafitra mety indrindra mifototra amin'ny toe-javatra eo an-toerana dia tsy ampy ankehitriny. Rehefa novolavolaina ny fitaovana dia zava-dehibe ny fampidirana ny hevitry ny mpiasan'ny ranomasina amin'ny ambaratongan'ny fitsaboana sy ny teknolojia mahomby indrindra amin'ny fiarovana ny ranomasina. Tsidiho ny Fitaovana fitantanana fahadiovana sy fitantanana rano maharitra hianarana bebe kokoa momba ny rafitra sy teknolojia fanadiovana.
Ny faritra be mponina sy ny tanàna misy indostrialy dia miankina amin'ny zavamaniry fitsaboana rano maloto (WWTP) afovoany handray sy hikarakarana ny maloto. Ny tambajotram-pantsakan'ny tatatra ambanin'ny tany ambanin'ny tany dia mitondra maloto avy amin'ny trano sy tranobe mankany amin'ny WWTP amin'ny alàlan'ny hery misintona sy paompy. Raha vao tonga any amin'ny toeram-pitsaboana rano maloto ny loto maloto dia mandalo dingana maromaro amin'ny fitsaboana alohan'ny famoahana azy. Ny karazana fitsaboana ampiasaina sy ny kalitaon'ny rano voatsabo dia miovaova arakaraka ny toerana, ny toetoetran'ny rano, ny fisian'ny teknolojia fitsaboana ary ireo antony hafa. Na izany aza, na dia ilaina aza ny fitsaboana dia mahazatra ny tsy fahombiazana ary tsy tokony horaisina fa miantoka fitsaboana sahaza azy ny lalàna. Amin'ny ambaratonga monisipaly sy fotodrafitrasa, ny fetran'ny famokarana otrikaina amin'ny effluent dia matetika ampiharina mba hiatrehana ny famoahana otrikaina sy ny fitrandrahana voajanahary. Na dia manampy aza ny mason-tsivana amin'ny fitsaboana, dia tsy ampy hiarovana ny tontolo iainana an-dranomasina amin'ny fandotoana raha tsy ampiharina be ny fepetra fampihenana ny otrikaina.
Raha vao tonga any amin'ny toeram-pitsaboana rano maloto ny loto maloto dia mandalo dingana maromaro amin'ny fitsaboana alohan'ny famoahana azy. Ny karazana fitsaboana ampiasaina sy ny kalitaon'ny rano voatsabo dia miovaova arakaraka ny toerana, ny toetoetran'ny rano, ny fisian'ny teknolojia fitsaboana ary ireo antony hafa. Na izany aza, na dia ilaina aza ny fitsaboana dia mahazatra ny tsy fahombiazana ary tsy tokony horaisina fa miantoka fitsaboana sahaza azy ny lalàna. Amin'ny ambaratonga monisipaly sy fotodrafitrasa, ny fetran'ny famokarana otrikaina amin'ny effluent dia matetika ampiharina hiatrehana ny famoahana otrikaina sy ny vokatr'izany eutrophication. Na dia manampy aza ny mason-tsivana amin'ny fitsaboana, dia tsy ampy hiarovana ny tontolo iainana an-dranomasina amin'ny fandotoana raha tsy ampiharina be ny fepetra fampihenana ny otrikaina.
Ny fitsaboana ambaratonga voalohany sy faharoa dia takiana amin'ny firenena sasany ary mitombo ny isan'ny fotodrafitrasa fampidirana tertiary. ref Na izany aza, na dia ilaina aza ny fitsaboana dia fahita matetika ny tsy fahombiazana ary tsy tokony horaisina fa ny lalàna napetraka dia manondro fitsaboana sahaza. Ho fanampin'izany, ny fetra amin'ny fatran'ny otrikaina ao amin'ny effluent dia ampiharina amin'ny ambaratongam-pokontany sy toerana hanatanterahana ny famahana ny otrikaina sy ny vokatr'izany. Manampy ny mason-tsivana fitsaboana, saingy tsy ampy hiarovana ny tontolo iainana an-dranomasina amin'ny fandotoana.
Any amin'ny tanàn-dehibe, tanàna maro no tsy mahita an'io hisakana ny fiasan'ireny ary ny fahaizan'ny fitazonana izay tany, tanety, ala ary zavatra hafa voajanahary natolotra. Rehefa avy ny orana dia mikoriana ambonin'ny tany tsy voaroy (izany hoe vita miorina) ny rano, manangona fako sy loto ary lasa fandosiran'ny maloto izay matetika antsoina hoe tafio-drivotra. Mba hampihenana ny fiatraikany amin'ny rano dia maro ny tanàna nanangana tatatra mitambatra mba hanangonana sy hitaterana ny rano tafio-drivotra mankany amin'ireo toeram-pitsaboana rano maloto toy ny rano maloto. Io dia mamela ny tobim-panafody hanala ireo menaka, fanafody famonoana bibikely, bakteria, antsanga, ary loto hafa izay misy ranon-dranomasina. Na dia toa mahomby aza ny rafitry ny tatatra, ny tafiotra mahery, ny lanezy lehibe, ary indraindray ny orana malefaka aza dia mety mihoatra ny fahaizan'ireo fantsona, mitazona tanky ary rafitra fitsaboana. Ny rafitra mavesatra be dia be dia be dia be no mandoaka rano maloto tsy voadio, anisan'izany ny loto maloto, ao anaty lalan-drano. Any Etazonia, olona 40 tapitrisa no tompoin'ny tatatra mitambatra, izay mandoaka rano maloto mihoatra ny 3 tapitrisa tapitrisa isan-taona amin'ny rano maloto sy tafio-drivotra isan-taona, amin'ny hetsika fitsangatsanganan'ny rano maloto. ref
Ny rafi-pitsaboana fanarian-drano maloto, na rafitra fanadiovana tsy manja, dia rafitra kely eo an-toerana hitantanana ny fako olombelona.
Manangona, mitsabo ary mamoaka rano maloto ao amin'ny toerana anaovana azy ny rafitra fitsaboana ny rano maloto voadidy. Misy karazana rafitra fitsaboana eo an-toerana misy. Ireto karazana manaraka ireto no be mpampiasa eran'izao tontolo izao:
Cesspools manana dingana iray amin'ny fifehezana sy fitsaboana. Dug na lavaka naorina nanangona effluent ho an'ny fametrahana voajanahary. Ireo lavaka dia mety tsy mitongilana na tafasaraka amin'ny tany sy ny rano ambanin'ny tany miaraka amina vato na vato misakana. Ny cesspools dia tsy manome fitsaboana sahaza azy ary soloina amin'ny toerana maro amin'ny rafitra fitsaboana mahomby kokoa.
Rafitra miorina amin'ny fitoeran-javatra manangona sy mitahiry rano maloto eny an-toerana ary mitaky ny fako hoentina any an-toeran-kafa hanaovana fitsaboana. Ireo rafitra ireo dia hita amin'ny toerana tsy dia misy fotodrafitrasa voafetra ary ao koa ireo lavarangana any an-davaka, izay mila tsy ho ritra intsony rehefa feno, ary trano fidiovana misy siny, izay rarahana isan'andro. Ny fitsaboana ny fako voaangona amin'ny safidy mifototra amin'ny kaontenera dia mety miainga amin'ny fizotran'ny fitsaboana mahazatra, fomba fanao amin'ny fanarenana loharano vaovao, na tsy misy mihitsy fitsaboana.
Sakan-drano hampiroborobo ny fahafaha-manao fitsaboana fanampiny amin'ny rano maloto amin'ny alàlan'ny zavamiaina bitika ao anaty tany, vatokely na fitaovana hafa alohan'ny fivoahana ao anaty rano na rano ambonin'ny tany.
Ny rafitra septic mahazatra sy cesspools dia tsy natao hanesorana ireo otrikaina na loto hafa avy amin'ny rano maloto, izay mety hiteraka loza mitatao amin'ny tontolo iainana any amin'ny morontsiraka. Ny teknolojia dia novolavolaina vao haingana mba hiresahana ny fanesorana ny otrikaina ao amin'ny rafitra itsinjaram-pahefana, saingy ireo vahaolana vaovao ireo dia tsy nampiharina be loatra noho ny tsy fisian'ny lalàna mifehy ny otrikaina amin'ny rano maloto. Ny fanatsarana ny rafitra itsinjaram-pahefana hahitana ny fihenan'ny otrikaina dia nampiseho fahombiazana bebe kokoa noho ny fananganana toeram-pitsaboana rano maloto be dia be. Ny famoahana bantsilana sy ny tsy fetezan'ireo rafitra ireo dia miteraka fandotoana loharano tsy misy fotony, izay matetika tsy voamarina. Na dia tratra aza ny loharanom-pahalotoana, dia vitsy ny vokatra ateraky ny tsy fanarahana, mamela kely ny fahafaha-mampihatra.
Ny fotodrafitrasa dia matetika no teren'ny topografikan'ny faritra. Ny faritra mitsingevana, ny tondra-drano, ny tany tsy mety simba ary ny faritra amorontsiraka dia mety hanasarotra ny fametrahana rafitra maro. Jereo ny fandinihana tranga avy any amin'ny Farihy Tonle Sap, Kambodza ary Farihy Indawgyi, Myanmar mamaritra ny fampandrosoana sy ny fampiharana ny Handypods avy amin'ny Wetlands Work.
Aorian'ny fitsaboana avy amin'ireo rafitra afovoany na itsinjaram-pahefana, dia alefa mivantana amin'ireo rano eo akaiky eo na amin'ny tany ny effluent voatsabo. Ny karazana fitsaboana ampiharina amin'ny rano maloto sy ny toerana misy ny fivoahana dia misy fiantraikany amin'ny rano manao rano maloto inona no mandoto ny ranomasina. Fantsona hialana manondraka effluent mivantana any anaty renirano sy ranomasina. Ny tanimbary, ny tany, ny honahona ary ny zavamaniry dia mampihena tsikelikely ny fivoahana ao anaty rano ambanin'ny tany, izay manampy amin'ny fanesorana ireo loto. Izany dia nitarika ny fivoaran'ny teknikan'ny fampihenana ny otrikaina mandroso sy ny vahaolana mifototra amin'ny natiora hanemorana ny fikorianan'ny effluent. ny fanadihadiana tranga avy any Santiago any amin'ny Repoblika Dominikanina mampiseho fahombiazana lehibe amin'ny fampiasana tany lemaka namboarina mba hampihenana ireo loto voaloton'ny organika natsipy tany amin'ny rano.
Ny famoahana rano maloto tsy ampy fanadinana dia mampitombo ny risika mampidi-doza ho an'ny olona, ​​ny biby ary ny tontolo iainana. Mora ihany ny mamaritra raha misy zavamaniry fitsaboana amoron-tsiraka mamoaka tsiranoka na effluent manta mivantana any amin'ny ranomasina. Sarotra kokoa ny mamantatra ny famoahana rano avy amin'ny rafitra kaontenera kely kokoa sy ny fivoahan'ny rano ambanin'ny tany. Jereo ny fanadihadiana tranga avy any Dar es Salaam, Tanzania, Afrika Atsinanana hiadiana amin'ny olana momba ny atin'ny lavadavaka any an-davaka izay nariana tany amin'ny tontolo iainana.